Dagaal u dhaxeeya Ciidamada Maamulka Jubba oo ka socda magaalada Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 12 July 2015 12 July 2015
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in Iska hor imaad u dhaxeeyay Ciidamada Maamulka KMG ah ee Jubba ayaa ka socda Xaafada Calanley, iyadoo dadka deegaanka ay soo sheegayaan in la isu adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan.
Iska hor imaadka ayaa ka dambeeyay markii askari ka tirsan kuwa Maamulka Jubba ay isku dhaceen ciidamo ka tirsan kuwa Nabadsugida oo la sheegay in askari ka tirsanaa qori laga qaatay.
Rasaasta ayaa si xoog leh uga dhaceysa agagaarka Xarunta Wasaaradda Arrimaha Gudaha Kismaayo, mana jirto cid kala dhex gashay, iyadoo durbaba iska hor imaadka uu saameyn ku yeeshay qeybo badan oo magaalada ka mid ah.
Wararka ayaa intaa ku daraya in ilaa saddex askari ay ku dhinteen dagaalka, waxaana kacsan xaalada magaalada, iyadoo goor dhow la sheegay in Saraakiil ka tirsan Maamulka Jubba ay inay ka baxeen halka iska hor imaadka uu ka socdo.
Ciidamada Maamulka Jubba ayaa waxaa dhowr jeer oo hore iska hor imaad uu ku dhex maray gudaha magaalada Kismaayo, waxaana isku dhacyada dhex mara uu ka dhashaa is faham waa soo kala dhex galo ciidamada dhexdooda.
Iska hor imaadkan ka socda magaalada Kismaayo ayaa ku soo beegmaya, iyadoo Madaxweynaha Maamulka Jubba Axmed Madoobe uu ku sugan yahay magaalada Garowe.
UN envoy condemns terrorist attacks in Mogadishu commend Somali and African Union security forces’s action